ရော်နယ်ဒိုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ၀န်ခံမှုတစ်ခု ပြုလုပ်သွားခဲ့တဲ့ မာဆယ်လို – Myan Ball
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်ကို ရော်နယ်ဒို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဟာ ဘောလုံးရာသီထက်ဝက်ကျိုးခဲ့ပြီ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဘာနေဗျူးကနေ ရော်နယ်ဒို ထွက်ခွာခဲ့မှု နောက်ဆက်တွဲဂယက်တွေကတော့ ဒီနေ့ထက်ထိ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ပုံပြင်တွေလို ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ရော်နယ်ဒိုဟာ အသင်းသစ်မှာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ အခြေကျသွားခဲ့ပြီး ခြေစွမ်းပြဂိုးတွေသွင်းနေခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်မှာ ရော်နယ်ဒိုနဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေအဖြစ် ရှိနေခဲ့တဲ့ နောက်ခံလူ မာဆယ်လိုက အခုအခါမှာလည်း ရော်နယ်ဒို အသင်းကနေ မထွက်ခွာခင် ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမတိုင်ခင်မှာ သူ့ကို ရော်နယ်ဒိုက ဘာပြောခဲ့လဲဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုတွေ
Esporte Interactivo နဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးမှာ မာဆယ်လို ဖြေကြားခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Football Espana က ပြန်လည်ရေးသားခဲ့ရာမှာတော့ မာဆယ်လိုက အခုလိုပဲ ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
“ဗိုလ်လုပွဲအတွက် ကျွန်တော်တို့ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်နေခဲ့ချိန်မှာ သူက ကျွန်တော့်ကို အသင်းကနေ ထွက်ခွာတော့မယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်၊ အရင်တုန်းက ခင်ဗျားတို့ကို ကျွန်တော် လိမ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်လည်း သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါက ကျွန်တော် လျှို့ဝှက်ထားရမယ့် ကိစ္စဖြစ်ကိုဖြစ်နေလို့ အဲဒီလို လုပ်ခဲ့တာပါ”
“ဂျူဗင်တပ်စ်ကို ကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လား? ဂျူဗီက ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ အသင်းတစ်သင်းပါ၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်နဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်တို့ကြားမှာ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပါတယ်” လို့ မာဆယ်လိုက ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ရီးရဲလ်ကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ပုံစံကောင်းကို ပြန်လည် ရရှိနေပြီဖြစ်ပြီး လာလီဂါမှာလည်း ဘာစီလိုနာကို (၆)မှတ်အကွာနဲ့ ဖိအားပေးနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ရီးရဲလျမကျဒရဈကို ရျောနယျဒို ပွောငျးရှခေဲ့တာဟာ ဘောလုံးရာသီထကျဝကျကြိုးခဲ့ပွီ ဖွဈပမေယျ့လညျး ဘာနဗြေူးကနေ ရျောနယျဒို ထှကျခှာခဲ့မှု နောကျဆကျတှဲဂယကျတှကေတော့ ဒီနထေ့ကျထိ မပွီးဆုံးသေးတဲ့ ပုံပွငျတှလေို ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။ ရျောနယျဒိုဟာ အသငျးသဈမှာ မွနျမွနျဆနျဆနျပဲ အခွကေသြှားခဲ့ပွီး ခွစှေမျးပွဂိုးတှသှေငျးနခေဲ့ပွီလညျး ဖွဈပါတယျ။
ရီးရဲလျမကျဒရဈမှာ ရျောနယျဒိုနဲ့ အရငျးနှီးဆုံးသူငယျခငျြးတှအေဖွဈ ရှိနခေဲ့တဲ့ နောကျခံလူ မာဆယျလိုက အခုအခါမှာလညျး ရျောနယျဒို အသငျးကနေ မထှကျခှာခငျ ခနျြပီယံလိဂျဗိုလျလုပှဲမတိုငျခငျမှာ သူ့ကို ရျောနယျဒိုက ဘာပွောခဲ့လဲဆိုတာကို ထုတျဖျောပွောကွားမှုတှေ
Esporte Interactivo နဲ့ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ အငျတာဗြူးမှာ မာဆယျလို ဖွကွေားခဲ့တာနဲ့ ပတျသကျပွီး Football Espana က ပွနျလညျရေးသားခဲ့ရာမှာတော့ မာဆယျလိုက အခုလိုပဲ ပွောကွားခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။
“ဗိုလျလုပှဲအတှကျ ကြှနျတျောတို့ လကေ့ငျြ့ခနျးပွုလုပျနခေဲ့ခြိနျမှာ သူက ကြှနျတေျာ့ကို အသငျးကနေ ထှကျခှာတော့မယျလို့ ပွောခဲ့ပါတယျ၊ အရငျတုနျးက ခငျဗြားတို့ကို ကြှနျတျော လိမျခဲ့တယျဆိုတာ ကိုယျတိုငျလညျး သိပါတယျ၊ ဒါပမေယျ့ ဒါက ကြှနျတျော လြှို့ဝှကျထားရမယျ့ ကိစ်စဖွဈကိုဖွဈနလေို့ အဲဒီလို လုပျခဲ့တာပါ”
“ဂြူဗငျတပျဈကို ကြှနျတျောပွောငျးရှဖေို့လား? ဂြူဗီက ကွီးကယျြခမျးနားတဲ့ အသငျးတဈသငျးပါ၊ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတျောနဲ့ ရီးရဲလျမကျဒရဈတို့ကွားမှာ စာခြုပျခြုပျဆိုထားပါတယျ” လို့ မာဆယျလိုက ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။ ရီးရဲလျကတော့ လကျရှိအခြိနျမှာ ပုံစံကောငျးကို ပွနျလညျ ရရှိနပွေီဖွဈပွီး လာလီဂါမှာလညျး ဘာစီလိုနာကို (၆)မှတျအကှာနဲ့ ဖိအားပေးနခေဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
ရီးရဲလ်ဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့ သတင်းထွက်ခဲ့တဲ့ ဖရန့်ဖတ်တိုက်စစ်မှူး ဂျိုဗစ်ကို ပေါင်သန်း ၅၀ နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ နီးစပ်နေတယ်လို့ သတင်းတစ်ရပ်မှာ ဖော်ပြပါတယ်။ ရီးရဲလ်ဟာ လာမယ့်ရာသီမှာ တိုက်စစ်အင်အား ဖြည့်တင်းဖို့အတွက် နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့ကာလမှာ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရိုသန်း ၅၀၀ လောက် […]
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဂိုးသမားတွေထဲက တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အိုဗလက်ကတော့ အက်သလက်တီကို နဲ့ စာချူပ်သစ်ချူပ်ဆိုလိုက်ပါပြီ။ သူ့ရဲ့ အရင်ကစာချူပ်အရ ၂၀၂၁ ဇွန်လမှာ စာချူပ်သက်တမ်းကုန်မယ့် အိုဗလက်ကတော့ ၂၀၂၃ နွေရာသီအထိ စာချူပ်သက်တမ်းကို လေးနှစ် တိုးမြှင့်ချူပ်ဆိုလိုက်တာပါ။ ၂၀၁၄ မှာ […]
အက်သလက်တီကိုနဲ့ ၂၀၂၃ အထိ စာချူပ်ထပ်ချူပ်လိုက်တဲ့ မန်ယူ ပစ်မှတ် ဂျန်အိုဗလက်
ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့ ဘရာဇီးဂန္တဝင်ကစားသမားကြီး ရီဗယ်လ်ဒိုက ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲက ကော်တင်ဟိုရဲ့ ဂိုးသွင်းအပြီး အောင်ပွဲခံဟန်ကို ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုများ ပြုလုပ်သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းက ၃-၀ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲမှာ ကော်တင်ဟိုက အသင်းအတွက် ပွဲသိမ်းဂိုးကို သွင်းယူပေးပြီးနောက် မျက်စိကိုမှိတ်ပြီး လက်ညှိုးနှစ်ချောင်းဖြင့် […]
ယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲက ကော်တင်ဟိုရဲ့ အောင်ပွဲခံပုံကို ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ ရီဗယ်လ်ဒို
စပိန်လာလီဂါ ထိပ်သီးကလပ် ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်အသင်းဟာ ဘင်ဖီကာအသင်းရဲ့ လူငယ်ကြယ်ပွင့်ကစားသမားလေးဖြစ်သူ ယာအိုဖီးလစ်ရဲ့ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြေးကို ပေးချေဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အသက် (၁၉) နှစ်အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ အဆိုပါ လူငယ်ကစားသမားလေးဟာ ယူရိုပါလိဂ် ကွာတားဖိုင်နယ် ပထမအကျော့ ပွဲစဉ်အဖြစ် […]
ယာအိုဖီးလစ်ရဲ့ စာချုပ်ဖျက်သိမ်းကြေးကို ပေးချေဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့တဲ့ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်